ukuqeqesha asebekhulile asebekhulile asebekhulile asebekhulile isikhathi esithile semfundo
Bonisa inhliziyo yakho futhi wenze umehluko
Ufunda ku ukuqeqesha ochwepheshe bezempilo ukwenza amasu ahlukahlukene okunakekela ngaphansi kokuqondiswa nokuqondiswa komhlengikazi. Usiza ukunakekelwa abamukeli ngokunakekelwa kwabo kanye nemisebenzi yokuphila yansuku zonke. Ufunda ukuthi ungaxhumana kanjani ngendlela efanele nokuthi ungabhekana kanjani nabamukeli bokunakekelwa. Njengomnakekeli uqeqeshwe ukusebenza ngokuzimela emakhaya asebekhulile, ezindaweni ezizinakekelayo noma ekunakekeleni ekhaya. Ngemuva kokuthola isitifiketi njengomchwepheshe wezezempilo ungaphinde uqhubeke nezifundo zakho ekolishi labahlengikazi.
Ukuqeqeshwa kwethu ekunakekelweni kwezempilo kuyindlela emibili yokuqeqesha. Ukufunda okubili kusho ukuthi uzothola isipiliyoni esiwusizo phakathi nezifundo zakho ngokuhlanganisa isikole nomsebenzi. nawe ukhokhelwa izinsuku oqala ukusebenza ngazo.
Kusuka ku-1 Septemba 2019, ochwepheshe bezempilo bangase benze imisebenzi eyengeziwe kumguli, njengokusebenzisa amaconsi ejoka noma ukulinganisa amazinga kashukela noma ukucindezelwa kwegazi. Kusukela manje kuya phambili sinikeza loqeqesho olwengeziwe.
Ezifundweni ezijwayelekile uthola udaba lwezihloko ezifanayo nalolo olufundiswa emfundweni yemfundo egcwele yesikhathi esigcwele kusuka ngonyaka we-3e kuze kufinyelele futhi kufaka unyaka we-7e. Uthola nenkambo yesiNgisi.
Ngaphezu kwalokho, ungabamba iqhaza kumaphrojekthi afana ne-mini-ibhizinisi, i-event agency kanye nokuningi!
Uma ufuna ukuqala ibhizinisi lakho, udinga isitifiketi sokuphathwa kwebhizinisi.
Sinikeza ithuba lokuthola lesi sitifiketi ngesikhathi semfundo yakho. Leli klasi liphela unyaka owodwa futhi linikezwe ngendlela yenkampani yabafundi.
Ngokubambisana nabanye uzama ukwenza inkampani yakho yabafundi ibe inzuzo futhi ufunda onke amaqhinga okuthenga nokuthengisa. Ngale ndlela uyazi ngokuqiniseka ekugcineni kwenqubo ukuthi ngabe ubusomabhizinisi buyinto yakho futhi unayo umthwalo oqinile wokusebenza njengomuntu ozisebenzelayo.
Uyakujabulela ukusebenza nabantu
Wamukelekile ukunakekela abanye
Ungasebenza kahle ndawonye
Kufanele ube neminyaka emingaki?
Ungalandela inkambo kusukela eminyakeni engu-15 kuya eminyakeni yakho eyi-25 ubudala.
Uma ngabe ngu-15, kumelwe ukuba ulandele okungenani iminyaka yokuqala ye-2 yemfundo yesikhathi esigcwele.
Uma usukhulile kune-18 kufanele ufanelekele umsebenzi okhokhelwayo. Kumelwe ube ngokomzimba futhi kufanele ube nemvume yokusebenza eBelgium.
Thintana nathi ngale webhusayithi noma ngefoni.
Ukuqeqeshwa kuthatha isikhathi esingakanani?
Enye ukuqeqesha ochwepheshe bezempilo kuthatha isilinganiso unyaka owodwa.
Imfundo ehambisanayo okusho ukuthi ungangena nganoma yisiphi isikhathi sonyaka kodwa ungaphetha kuphela ngo-30 Juni.
Kufanele uhambe kulolu qeqesho Zorgkundige i-pre-education Ukuzilungisa baye balandela.
Yikuphi ulwazi olufanele okufanele ube nakho?
Ukuze ukwazi ukulandela uhlelo lweZorgkundige, kumelwe ukuthi usuvele ufeze ikhono loMnyango Wokunakekela. Lokhu kungenziwa ngesitifiketi Ukuzilungisa ukuthola imfundo yesikhungo semfundo ephakeme yesikhathi esithile noma i-3 degree Care ngesikhathi semfundo egcwele.
Ulwazi olwanele lweDutch kuyimfuneko, ngoba ukuxhumana nomhlinzeki wokunakekelwa kanye nabalingani bakho beqembu kubaluleke kakhulu.
Umsebenzi wakho ubonakala kanjani?
Sebenzisa njengo Zorgkundige ngumsebenzi womphakathi. Uyeza kwesinye ithimba lokunakekelwa okusho ukuthi udinga ukusebenza ndawonye. Uzoxhumana nabanakekeli, odokotela, umndeni kanye namavolontiya. Njengomphathi wezezempilo unamahora okusebenza okuguquguqukayo futhi uvame ukusebenza ezishintshini.
Chofoza lapha ukuze uthole olunye ulwazi (website VDAB)
Ungakanani amathuba okusebenza?
Kunesidingo esikhulu Ochwepheshe bezempilo emakethe yezabasebenzi. Abafundi abanomsebenzi esikoleni esikoleni sethu bangavame ukugcina lo msebenzi ngemuva kokuphothula.
Khona-ke uzokwazi ukusebenza, isibonelo, izikhungo zokunakekelwa zokuhlala, ukunakekelwa ekhaya, isibhedlela noma abakhubazekile.
Umpheki ufanelwe ukuthini?
Ngabe uhola kangakanani njengomhlinzeki wezempilo uyoxhomeke kakhulu endaweni yakho yokusebenzela nokuthi ngabe isebenza yini ekushintsheni noma cha.
Ungakwazi yini ukuqhubeka ufunda?
Uma uthanda ukusebenza nezingane, ungaya esikoleni sethu esikoleni Imigwaqo ku Ingane landela.
Uma uthola idiploma yakho emfundweni yesibili, usengathatha izifundo ezahlukene kwezinye izikole. Isibonelo, ungaqhubeka nokutadisha umhlengikazi we-HBO, ukunakekelwa kwezithombe, usizo lwekhaya ...
Uma uthola i-degree ekufundeni nasekusebenzeni, uzothola idiploma yemfundo yesikole. Silandela ikharikhulamu ye-BSO - Secondary Secondary Education.
Ungaqhubeka nezifundo zakho ngale diploma. Khumbula ukuthi ukutadisha okuqhubekayo akuwona umgomo wokuqala woqeqesho lomsebenzi. Inhloso yokuqeqeshelwa amakhono ukukulungiselela imakethe yezabasebenzi. Ngakho-ke sinaka kakhulu amakhono owadingayo ukuze ukwazi ukusebenza.
Uma uhlela ukuqhubeka ufunda, sicela uxoxe ngalokhu nabothisha bakho be-PAV. Bangakukwazisa uma lokhu kunengqondo. Bangabuye bahlole ukuthi unelungelo lokuphumelela. Kodwa ngaphezu kwakho konke ... bangakunikeza amathiphu futhi bakuqondise ezinhlelweni zakho zokuqhubeka ufunda.
Ukuqeqeshwa kwezeMpilo ngokuningiliziwe
Ufunda ohlelweni Zorgkundige indlela yokusiza unesi
Uzogcina ifayela lomhlinzeki wokunakekela.
Uma usiza umhlengikazi, ungenza imisebenzi eminingi yokwelapha njengomsebenzi wezempilo.
als Ukuzilungisa / Ukunakekela Ukuvikelwa usebenza nabantu ezindaweni ezihlukahlukene zokunakekelwa.
Uthola kubalulekile ukuthi umamukeli wokunakekelwa uthola ukunakekelwa okufanele. Ufuna nokuqinisekisa inhlalakahle yomamukeli wokunakekelwa.
Ungaphila ekuhlangenwe nakho komhlinzeki wokunakekela asebekhulile futhi uhambela umndeni wakhe ngenhlonipho.
Uvuselela umhlinzeki wokunakekela esimweni sokuphepha futhi uzizwe ekhaya. Usebenza ndawonye eqenjini.
Ungathola isipiliyoni somsebenzi wezobuchwepheshe ku:
Izindawo zokuhlala nezokunakekelwa.
Izibhedlela, izikhungo zokuvuselela.
Izindlela zokuphila ezivikelekile, izinhlangano ezihloswe ngabantu abakhubazekile.
Iyini isici somsebenzi wezempilo?
Ochwepheshe bezempilo sebenze ezimweni zokunakekelwa okunzima kakhulu; Uqala ukusebenza ngaphansi kokuqondisa, kamuva ngokuzimela.
Yazi izidingo nezidingo zeqembu elihlosiwe. Ukunakekelwa ngokwemvelo kuyisici esivamile sokunakekelwa okuyisisekelo ngaphakathi kokunakekela ekhaya nasekhulile.
Uchwepheshe ngamunye wezempilo uyaba yilungu leqembu labahlengikazi. Usebenza ohlelweni lokunakekelwa.
Uqinisekisa isimo esifanele sokuphila nokuphila futhi uqaphelisise inhlalakahle yabantu asebekhulile kanye / noma umndeni.
Ukufunda + Ukusebenza ngokuningiliziwe
Ukufunda nokusebenza kukukwazi futhi ngaphansi kwegama Imfundo yesikhathi esithile.
Ufunda a umsebenzi noma umsebenzi ngokuhlanganisa umsebenzi nokufunda.
Isibonelo, uya esikoleni izinsuku ezimbili ngesonto bese usebenza izinsuku ezintathu.
Uzothola umbiko kane izikhathi ngonyaka ngemiphumela yakho kokubili esikoleni kanye nokusebenza komsebenzi.
Ku ukuqeqeshwa komsebenzi uzofunda umsebenzi futhi ungathola isitifiketi sekhono lobuchwepheshe.
Ngaphezu kwalokho, nawe ulandela usuku olulodwa ngesonto izifundo ezijwayelekile ngokuya ngekharikhulamu yemfundo yezandla. Ezifundweni ezijwayelekile ungathatha idigri yesibili, ibanga lesithathu noma ngisho nediploma yakho yezemfundo yesibili.
Ukufunda nokusebenza uhlelo oluyingqayizivele.
Sisebenza ngaphandle kwamaphoyinti. Uzokwahlulelwa kuphela ngalokho ongakwenza.
Imiphumela yakho ezifundweni ezijwayelekile (i-PAV) ayithinti imiphumela yakho ngezihloko ezisebenzayo.
Sisebenza nge-modular ukuze ukwazi ukuphothula iziqu phakathi nonyaka. Uma usufinyelele zonke izici ku-PAV, uzoklonyelwa idijithali yakho noma idiploma.
Ngakho-ke awukwazi "ukuhlala phansi" futhi ufunda ngesantya sakho.
Ungathanda ulwazi oluningi? Thintana nathi ngefomu noma ngocingo.
Ukuqeqeshwa kubiza ukuthini?
Sizama ukugcina izifundo zethu ezishibhile ngangokunokwenzeka.
Ukhokha imali esikoleni ehleliwe ngonyaka. (Le mali izonciphisa uma ubhalisa ngemuva kwe-1 March).
Ngaphezu kwalokho, ukhokha kuphela lokho oyisebenzisayo, ngokufanelana nomsebenzi wakho nangaphambi kokuphuma.
Izindleko zokuqeqesha ngokuhlukene ziyahluka kakhulu.
Izindleko ezincane kakhulu zokuqeqesha zibiza i-185 € ngonyaka; i-350 ebiza kakhulu.
Ungakhokha imali ekuphathweni; ungadlulisela inani futhi ungakhokha ngekhadi lebhange.
Awudingi ukukhokha imali yesikole ngenye indlela. Izikhathi ezine ngonyaka uthola i-akhawunti yesikole.
Yini okufanele ukhokhe uma ubhalisa?
Uma ubhalisa, sishaya phambili kwe-50 euro.
Uma ungeke ukwazi ukukhokha lokho ngenye indlela, ungakhokha futhi ngezitolimende.
Uthola izifundo campus Ruggeveld ku-Deurne.
I-2100 Deurne (i-Antwerp)
Ungasifinyelela nge tram 10 - tram 5 - tram 8 - ibhasi 19 - ibhasi 410 - ibhasi 411 - ibhasi 412
Buka ku-Google Maps
Umbuzo othize mayelana nale mfundo?
U-Ellen Smedts - Umxhumanisi Wokuqashwa
ellen.smedts@spectrumschool.be - 03 / 360 26 35
Sithinte ngewebhusayithi noma ngocingo. Ungahlala ungene njalo ngezikhathi zomsebenzi wesikole.
Mayelana nesikole sethu
Isikole sethu, i-Spectrumschool, sinikeza okungaphezulu kwe-50 ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe kanye nobuchwepheshe ku-Nijverheid, STEM, Sport, Care, Hospitality & Logistics.
Kusukela embonweni wethu wokufunda, sinikeza umfundi ngamunye inkambo ehlelwe. Sisebenza ngendlela ejwayele ukuziphatha futhi sigxila kakhulu ekunikezeni isiqondiso emakethe yezabasebenzi.
Ngaphandle kwephakheji lesifundo, sisebenza ngemisebenzi kanye nemisebenzi kakhulu ekuthuthukiseni ubuntu bomfundi nokuthola amakhono akhe. Ukunakekelwa okuyisisekelo okuyisisekelo kuphakathi.
Ngaphezu kwalokho, sinomnyango we-OKAN (Ukususa Isigaba Sabantu Abangenayo Inzuzo).
Ifoni: + 32 (0) 3 328 05 00
Ifeksi: + 32 (0) 3 328 05 10
UPlantin & Moretuslei 165
Ifoni: + 32 (0) 3 217 43 40
Ifeksi: + 32 (0) 3 217 43 49
NgoMsombuluko: 8u00 - 16u30
NgoLwesibili: 8u00 - 16u30
NgoLwesithathu: 8u00 - 12u00
ULwesine: 8u00 - 16u30
ULwesihlanu: 8u00 - 16u30
ivaliwe ngoMgqibelo nangeSonto